Paws Off! ကလေးမတော်မတရားပြုမှုကိုရပ်တန့်ပါ။ - ကလေးမတော်မတရားပြုမှုကိုရပ်တန့်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 15 2020
သံသယဖြစ်ဖွယ်ကလေးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု - ၇၄ နှစ်အရွယ်တရားခွင်မတိုင်မီထိန်းသိမ်းခံရခြင်း
ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှု - တရားရေး ၀ န်ကြီး Christine Lambrecht သည်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုစီစဉ်သည်
ဆူဆန်နာကိုလူသတ်သမားအလီဘီအား ၁၁ နှစ်အရွယ်မုဒိမ်းကျင့်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်သည်
စီရင်ချက်များ - ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်
ကလေးများကိုမြေအောက်ခန်းထဲတွင်ချုပ်နှောင်ထားသောအက်ဒ်မွန်အမျိုးသမီးများသည် ၈ နှစ်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခံရသည်
Cape Breton သူသည်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်စွဲချက်တင်ခံရသည်
20 ဇွန်လ 2020
13 ဇွန်လ 2020
အခုသူမတစ်ခုခုပြောင်းချင်နေပြီ။ ဖက်ဒရယ်တရားရေး ၀ န်ကြီး Christine Lambrecht (၅၄၊ SPD) မှကာကွယ်ရန် ...
Mainz ကျောင်းမှ Susanna ကျောင်းသူလေး Ali B. ကိုလူသတ်မှုဖြင့်ထပ်မံအပြစ်ရှိသည်။ သောကြောင့် ...
28 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
25 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
သားကောင်ရဲ့ရှေ့နေ၊ အစိုးရရှေ့နေ၊ စွပ်စွဲခံရသူနှင့်သူ၏ရှေ့နေ (ဘယ်ဘက်မှ) တရားရုံးတွင် ...
22 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
Münsterမှအဆိုတော်တစ် ဦး နှင့်ဘောလုံးနည်းပြသည်ကလေးသူငယ်များအားအလွဲသုံးစားပြုမှုကြောင့်တနင်္လာနေ့တွင်ငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်
Düsseldorf (dpa) - လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှDüsseldorfသို့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
8 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
အောက်ပိုင်း L'Ardoise မှအသက် ၄၉ နှစ်အရွယ်လူငယ်ကိုတနင်္လာနေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
COVID-19 ကူးစက်မှုကာလအတွင်းကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုတိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သူများကစိုးရိမ်ကြသည်။
လက်ကမ်းစာစောင် - ရပ်တန့်ခြင်းသည်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုကိုတားဆီးရန်ပညာရေးနှင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကာကွယ်ခြင်းအတွက်အကျိုးအမြတ်မယူသောအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မူကြိုနှင့်မူလတန်းကျောင်းများရှိကလေးများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ “ Paws away” နှင့်“ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်” ကဲ့သို့သောပြဇာတ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Aschaffenburg 20 ဇွန်လ 2020
ဇူးရစ်မြို့ 19 မေလ 2020
အယ်လ်ဘာတာ 28 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
ဇူးရစ်မြို့ 25 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
ဒေါ့မွန် 22 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
Düsseldorf 22 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
Edmonton 8 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
ကိပ် Breton အဘိဓါန် 8 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
အယ်လ်ဘာတာ 8 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
uk4ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
South Carolina4ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှပျောက်သွားသော ၆ နှစ်အရွယ်အမေရိကန်မိန်းကလေး၏အလောင်းကိုရဲများကတွေ့ရှိခဲ့သည်
'ကျွန်မရဲ့အမေကကျွန်မကို ၆ နှစ်အရွယ်မှာပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော့်အမေလိုပဲ'
montana4ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
Montana ဆယ်ကျော်သက်သည် ၁၂ နှစ်အရွယ်တူလေးသေဆုံးခြင်းအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းဝန်ခံသည်
ဘရွတ်ကလင်း4ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
သမီး ၂ နှစ်ရေနစ်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်အမေဟာသူ့ကိုယ်သူစိုစွတ်နေတဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်
Dresden 20 မတ်လ 2020
ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု - Dresden အစိုးရရှေ့နေသည်လူကိုချုပ်နှောင်ထားသည်
ရေ 19 မတ်လ 2020
Gießenခရိုင်တရားရုံး - ၃၂ နှစ်အရွယ်တွင်ကြီးလေးသောကလေးများအားနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်
Düsseldorf 16 မတ်လ 2020
ကလေးများအားတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတွင် ၂၅ နှစ်အရွယ်တရားခွင်
လိုင်ယွန် 16 မတ်လ 2020
ပြင်သစ် - ကလေးများအလွဲသုံးစားမှုအတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟောင်းအတွက်ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်
လိုင်ယွန်လား 16 မတ်လ 2020
Bergisch Gladbach9မတ်လ 2020
Bergisch Gladbach မှပထမဆုံးတရားခံ - သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ကလေးအကြောင်းပါ
ကံ9မတ်လ 2020
ကလေးအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာ NRW စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ
Kiel5မတ်လ 2020
လေးနက်သောကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအတွက် 41 နှစ်အရွယ်
Bonn5မတ်လ 2020
ကလေးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု - ၇၂ နှစ်အရွယ်ပင်စင်စားများအတွက်ထောင်ဒဏ်ရှစ်လ
ဘာလင်2မတ်လ 2020
ကလေးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု - မိခင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်
သင်၏လှူဒါန်းမှု၏ ၉၅% ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပညာရေးအတွက်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အသင်းအဖွဲ့၏စီမံခန့်ခွဲမှုကြိုးပမ်းမှုအတွက် ၅% သာဘတ်ဂျက်လျာထားသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င်အများစုသည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သည်။
လိုင်ယွန် 17 ဇန်နဝါရီလ 2020
အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် - ဤသည်ပြင်သစ်ရှိယဇ်ပုရောဟိတ်ဟောင်းတစ် ဦး အတွက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။
Deggendorf 29 ဇွန်လ 2017
Augsburg 16 ဇွန်လ 2017
သြဂတ် - ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးသည်ကလေးသူငယ်မတော်မတရားပြုမှုကိုဝန်ခံသည်
Frankfurt 14 မတ်လ 2010
စာရေးသူ Bodo Kirchhoff ကအလွဲသုံးစားမှုကိုတင်ပြသည်
စာရေးဆရာဘိုဒို Kirchhoff (ပင်လယ်စတင်အစပြုခြင်း) သည်လည်းကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်စော်ကားခံခဲ့ရသည်။
ဘာလင် 11 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
ဘာလင် - ရုပ်ရှင်ရုံသည်အလွန်လျင်မြန်သည်။ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှစီရင်ချက်ချခြင်းဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်များ - WHO၊ UN၊ AI နှင့်ကလေးများအားကယ်တင်ခြင်း
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မိန်းကလေးငယ်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ခြင်းများကိုအတင်းအဓမ္မပြုလုပ်ခိုင်းသည်
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ယောက်ျားလေးများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ခြင်းများကိုအတင်းအဓမ္မပြုလုပ်ခိုင်းသည်
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ပါ ၀ င်နေသောကလေးများ
Most Viewed ရေးသားချက်များ
4 ခုနှစ်ဧပြီလ 2020
လက်ကမ်းစာစောင် - ကလေးအလွဲသုံးစားမှုကိုရပ်တန့်ပါလိုက်
ကလေးများအား ပြန်၍ တိုက်ခိုက်ရန်နှင့် "မဟုတ်ဘူး!" ကိုပြုလုပ်သည်။ လက်ခံသည်။ ကလေးတွေကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်၊ ​​ပြန်တိုက်ခိုက်တယ်၊
Twitter ပေါ်တွင် Retweetလက်ကမ်းစာစောင် - ကလေးမတော်မတရားပြုခြင်းကိုတားဆီးထား
Tour41 eV - လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုဆန့်ကျင်သောလှုပ်ရှားမှုမဟာမိတ်အဖွဲ့@ Tour41eV·
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ... ယခုပင် BURGISCH GLADBACH တွင်စနေနေ့တွင်နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိ Uhr OB11.07.2020! ကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးကွန်ယက်! shttps: //tour10.net/termin/ob16-netzwerken- gegen-sexuelle-gewalt-an-kinder /
တွစ်တာ 1280630345549914113 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1280630345549914113 အပေါ် Retweet8တွစ်တာ 1280630345549914113 အပေါ်လိုပဲ12တွစ်တာ 1280630345549914113
# အလွဲသုံးစားမှု - ကျူးလွန်သူများသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မတူဘဲ https://www.welt.de/regionales/nrw/article211104153/Kindesmissrauch-in-NRW-nichts-Neues.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web @welt ကနေတဆင့်
တွစ်တာ 1280507818341290001 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1280507818341290001 အပေါ် Retweet17တွစ်တာ 1280507818341290001 အပေါ်လိုပဲ26တွစ်တာ 1280507818341290001
#use ၏အကျိုးဆက်များကိုသူတို့နားလည်ပြီဟုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ထိခိုက်နစ်နာသူများ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအမှန်တကယ်မချဉ်းကပ်နိုင်ကြပါ။ နားလည်မှုသည်နားလည်မှုဖြင့်စတင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်ကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု #processing အပေါ် #Church https://bit.ly/31RvPm5
တွစ်တာ 1280460016743579650 အပေါ် Replyတွစ်တာ 1280460016743579650 အပေါ် Retweet5တွစ်တာ 1280460016743579650 အပေါ်လိုပဲ14တွစ်တာ 1280460016743579650
Paws Off - ကလေးသူငယ်မတော်မတရားပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်ကလေးသူငယ်လိင်အကြမ်းဖက်မှုမှပညာပေးရန်နှင့်တားဆီးရန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများအားနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကလေးများအားသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အများပြည်သူသိရှိထားသည့်ကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြလိုပါသည်။
နှိပ်ရာ လှူဒါန်းခြင်း ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း links များ
နောက်ကျောထိပ်တန်း button ကိုမှ
1 နိုဝင်ဘာလ 2019
Deutsche Kinderhilfe သည်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရန်တောင်းဆိုနေသည်
26 ဇန်နဝါရီလ 2020
Canisius ကောလိပ်တွင်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း - များစွာသောသားကောင်များသည်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်
ဤသည်ကဒီမှာကြည့်ရှုရန်သွားပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးငါတကယ်တော့ ple ...
ကြိုက်တယ် !! ဒီအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါးထုတ်ဝေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ....
မင်္ဂလာပါ အလယ်အလတ်ဖြင့်စတင်ရန် editi ...